Gịnị mere nke a ji dị mkpa? Ụmụaka chọrọ ka ndị kacha mkpa ná ndụ ha, ya bụ, ndị mụrụ ha, ghọta otú obi dị ha. Nke a dịkwa ha mkpa. Ọ bụrụ na mgbe ọ bụla ụmụaka kwuru ihe dị ha n’obi na ndị mụrụ ha adịghị eji ihe ha kwuru akpọrọ ihe, ọ ga na-esiri ụmụaka ahụ ike ịgwa ha ihe dị ha n’obi. Ha nwedịrị ike ibido chewe ma hà nwekwara ike ichere onwe ha echiche.
Ihe mere o ji esi ike: Mgbe ụmụaka na-ekwu ihe dị ha n’obi, ha na-ekwubiga ya ókè. N’eziokwu, ụfọdụ n’ime ihe ụmụaka na-ekwu na-agba ndị mụrụ ha agba ná ntị. Dị ka ihe atụ, nwatakịrị iwe ji nwere ike ịsị, “Ike ndụ agwụla m.” * Ihe mbụ ga-apụ nne ya ma ọ bụ nna ya n’ọnụ bụ “Mechie ọnụ! O nweghị ike ndụ gwụrụ gị.” Ndị mụrụ ụmụ nwere ike ichegbuwe onwe ha na ọ bụrụ na ha agbachi nwa ha nkịtị mgbe o kwuru ihe na-adịghị mma nke dị ya n’obi na ọ ga-adị ka hà nabatara ihe o kwuru.
Ihe ga-enyere unu aka: Tinyenụ ndụmọdụ dị na Bible n’ọrụ nke na-asị na anyị “aghaghị ịdị ngwa n’ịnụ ihe, ghara ịdị ngwa n’ikwu okwu.” (Jems 1:19) Buru n’obi na Jehova bụ́ Chineke elefurughị echiche na-ezighị ezi nke ọtụtụ n’ime ndị ohu ya kwesịrị ntụkwasị obi kwupụtara anya. Ọ bụ ya mere o ji hụ na e dere ha na Bible. (Jenesis 27:46; Abụ Ọma 73:12, 13) Dị ka ihe atụ, mgbe ọnwụnwa dị oké njọ bịaara Job, ọ sịrị na ọ dị ya ka ya nwụọ.—Job 14:13.
O doro anya na e kwesịrị ịgbazi ihe ụfọdụ dị Job n’obi. Ma, kama ikwu na ihe Job kwuru abụghị eziokwu ma ọ bụkwanụ gwa ya ka o mechie ọnụ, Jehova kwanyeere Job ùgwù site n’iji ndidi chere ka o kwuchaa otú ọ dị ya n’obi. Ọ bụ mgbe o kwuchara ihe dị ya n’obi ka Jehova ji obiọma gbazie ya. Otu nna bụ́ Onye Kraịst si otú a kwuo ya: “Ebe ọ bụ na Jehova na-ahapụ m ka m gwa ya ihe dị m n’obi n’ekpere, echere m na o ziri ezi ka m hapụ ụmụ m ka ha kwuo ihe dị ha n’obi, ma nke ọma ma nke ọjọọ.”
Ọ bụrụ na e nwee mgbe ọzọ ị chọrọ ịsị nwa gị, “Ihe ahụ i kwuru abụghị otú ọ dị gị n’obi” ma ọ bụ “O nweghị otú ị ga-esi chewe ụdị ihe ahụ n’obi gị,” cheta ụkpụrụ a a ma ama nke Jizọs tụrụ: “Dị nnọọ ka unu chọrọ ka ndị mmadụ na-emeso unu, na-emeso ha n’otu ụzọ ahụ.” (Luk 6:31) Dị ka ihe atụ, ka e were ya na mmadụ ji obi ọjọọ meso gị omume n’ebe ị na-arụ ọrụ ma ọ bụ na e nwere ihe menahụrụ gị, ikekwe, ọ bụ gị ka o si n’aka. Gị akọọrọ ezigbo enyi gị na ị maghịzi ihe ị ga-eme eme, gwakwa ya na ike ịrụ ọrụ gị agwụla gị. Gịnị ka ị ga-achọ ka enyi gị mee? Ị̀ ga-achọ ka ọ gwa gị na ihe ahụ i kwuru abụghị otú ọ dị gị n’obi, gwakwa gị ozugbo na ọ bụ gị ka nsogbu ahụ si n’aka? Ka ọ̀ ga-akara gị mma ka enyi gị sị gị: “Ahụrụ m na ihe a nyere gị nsogbu. Ị hụsiri anya taa”?
Ma ụmụaka ma ndị toruru ogo mmadụ ga-aka anabata ndụmọdụ ma ọ bụrụ na ha chere na onye na-enye ha ndụmọdụ ahụ ghọtara ihe dị ha n’obi, ghọtakwa nsogbu bịaara ha. Okwu Chineke sịrị: “Obi onye maara ihe na-eme ka ọnụ ya nwee uche, ọ na-atụkwasịkwara egbugbere ọnụ ya abụọ mmụta.”—Ilu 16:23.
Olee otú unu ga-esi hụ na a na-eji ndụmọdụ ọ bụla unu nyere akpọrọ ihe?
^ par. 4 Unu ejila ihe ọ bụla ụmụ unu kwuru banyere igbu onwe ha gwurie egwu.
[Ihe Odide Gbatụrụ Okpotokpo nke dị na peeji nke 26]
“Onye na-azaghachi okwu tupu ọ nụ, uche gbagọrọ agbagọ na ọnọdụ ihere ka ọ bụụrụ ya.”—Ilu 18:13
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gosinụ na Unu Ghọtara Otú Obi Dị Nwa Unu